राम्रो बेल्ट कसरी बाँध गर्न?
हैंडबैग, पर्स, स्टाइलिश जूता संग, बेल्ट हरेक आधुनिक केटी को एक फैशन दराज को अभिन्न भाग भएको छ। यो एक बेल्ट प्रयोग वा प्रयोग पट्टा विशेष utilitarian उद्देश्य -, को प्यान्ट वा स्कर्ट कायम गर्न गिर होइन। अब यो एक स्टाइलिश सहायक, जो बिना छवि पूरा छलफल गर्न सकिँदैन छ। र एक राम्रो बेल्ट बाँध कसरी को तरिका, फैशन एक अविश्वसनीय रकम हुक्म।
अब बेल्ट मात्र सुरुवाल वा स्कर्ट हुनुहुन्छ। तिनीहरूले कपडे, बाहिरी कपडा, ब्लाउज र जैकेट सजाउनु। कसरी ब्लाउज मा, उदाहरणका लागि, एक बेल्ट बाँध गर्न? पातलो पट्टा भने, तपाईं बस आफूलाई राम्रो एकाइ गर्न बकसुआ को शीर्ष मा सीमित गर्न सक्नुहुन्छ। उनको ब्लाउज मा एक पट्टा बाँध कसरी अन्य विकल्प: यो कमर मा छैन, र छाती अन्तर्गत समाधान गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यो एक contrasting बेल्ट र सेतो शर्ट वा ब्लाउज साँघुरो ट्राउजर वा जिन्स संग को लागि एक जीत-जीत संयोजन छ। जडान पातलो द्वारा - यो मामला मा, तपाईं पनि विपरीत बनावट मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ शिफन देखि ब्लाउज , जीन्स लागि भद्दा बेल्ट shabby, artificially वृद्ध छाला को सबै भन्दा राम्रो संग।
एक पटकमा धेरै बेल्ट प्रयोग - एक स्टाइलिश बेल्ट बाँध कसरी अर्को तरिका हो। एक रंग वा शैली तिनीहरूलाई कायम। राम्रो पनि दुई साँघुरो रंग अन्य भन्दा एक पहना बेल्ट संयोजन हेर्नेछ। बेल्ट को अन्त्य पछि पार गर्नुपर्छ। त्यसपछि अगाडि दुई-रंग बेल्ट डोमिनोइज बारी। सैन्य शैलीमा वस्त्र लागि उपयुक्त धेरै संकीर्ण बेल्ट लगाउन अर्को तरिका हो। को कमर मा एक यस्तो बेल्ट राख्नु, र यो थकित गर्नुपर्छ, र तरिका नै दुई आफ्नो छाती, perekin'te काँध पार र मुख्य बेल्ट वरिपरि कस्नु swordbelt। यस्तो छवि ध्यान धेरै आकर्षित हुनेछ।
एक पट्टा कसरी बाँध गर्न उनको पोशाक मा? कि सम्झना साँघुरो बेल्ट साथै, र बेल्ट पनि लोकप्रिय corset प्रकार छन्। तिनीहरूले कुनै पनि स्त्री पोशाक गर्नेछ कि, कमर जोड र नितम्ब आवंटित गर्नेछ। तथ्याङ्कले को वस्तुतः कुनै पनि प्रकारको मा राम्रो कूल्हों मा जातीय पट्टियाँ हेर्न हुनेछ। सजावटी तत्व, tassels, pompoms, कढाई वा मोती, तिनीहरूले पनि कपडे र tunics, संख्या को छैन फरक कट केही मोडेल पुनर्जीवित गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्झना पनि, ब्रांडेड बेल्ट, साथै यो सहायक सबैभन्दा अप्रत्याशित कुरा बनाउन सक्छ रूपमा: साटन रिबन सही रंग, बेल बैंड, स्कार्फ, स्कार्फ, छाला र मखमल जूता। पनि व्यापक रंगीन laces स्केट यदि तिनीहरूले लुगाहरू संग संयुक्त छन् जूता, एक स्टाइलिश बेल्ट परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, एक स्टाइलिश बेल्ट आफ्नो बनाउनुहोस् र मोती, क्रिस्टल, मोती, कृत्रिम फूल, बुना वस्तुहरू र अन्य सामान संग सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को टिप। कसरी एक अति-सुन्दर तस्बिर सिर्जना गर्न पट्टा कस्नु गर्न? असामान्य साइटमा लामो स्ट्रिङ बाँध वा मोती को लामो स्ट्रिङ प्रयोग गर्नुहोस्। विशेष लाभप्रद एक यस्तो सहायक जीन्स वा रोमान्टिक पहिरन संग हेर्न हुनेछ। बस यस्तो मामला मा राख्नु छैन , घाँटी मा सजावट एक magpie जस्तो छैन ताकि। यस्तो देखिने सानो बेल्ट वा waistband कल्पना ठाउँ खुल्छ र एउटै outfit पूर्ण बिभिन्न बनाउन मद्दत गर्छ।
Crochet पट्टियां crochet: पहिलो अनुभव
आफ्नै हातले घर लागि शिल्प: हस्तनिर्मित गलैँचाहरु
बच्चाहरु को लागि बुनाई - इनामदायी शौक
घर छुट्टी कहिले: कसरी आफ्नै हातले फूल को बलमा बनाउन
कसरी कपडा र मुद्दा देखि आफ्नै हातले घोडा बनाउन। विस्तृत मास्टर कक्षाहरू
बहुलक माटो बाहिर आफ्नो हातमा कान को बाली कसरी बनाउने
समय पर्याप्त छैन भने, कसरी सुत्न
कसरी सुन्दर बन्दागोभी आकर्षित गर्न?
प्लास्टिक र शारीरिक लागि विश्वव्यापी पलिश
"गुरुत्व फल्स": को sequel हुनेछ? श्रृंखला निर्माता Aleks Hirsh प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ।
रंग र गुणवत्ता को कांस्य प्रकारको
किन समतल flounder: एक वैज्ञानिक व्याख्या
Evpatoria मा होटल। Evpatoria, Crimea: मनोरञ्जन, होटल
होटल "प्राग" गर्न "Katerina पार्क": विवरण, समीक्षा
एक वर्णन, तयारी र सल्लाह: प्रोस्टेट को Transrectal अल्ट्रासाउंड
सलाद चिकन र अन्य सामाग्री संग "बजेट"
एक वर्ष मुनिका बच्चा को तापमान के हुन र कसरी मापन गर्न सक्नुहुन्छ